Cimilada Polar, sidee tahay Waa maxay muuqaalka cirifku? Halkan ka ogow! | Saadaasha Shabakadda
Weligaa ma yaabtay sidee buu yahay cimilada cirifka? Waan ognahay inay tahay mid aad u qabow, in muuqaalka uu sannadka intiisa badan barafku ku daboolan yahay, laakiin ... maxay sababta sidaas u noqotay? Maxay yihiin runtii heerkulka ugu yar iyo kan ugu sarreeya ee laga diiwaan geliyo meelaha ay ku leeyihiin cimilada noocan ah?
Tan gaarka ah waxaan kuu sheegayaa oo dhan oo ku saabsan cimilada cad, kan ugu qabow jira Dunida.
1 Astaamaha cimilada cirifka
2 Tusaalaha garaafka cimilada
3 Halkee ku taal?
4 Noocyada cimilada cirifka
5 Cimilada Antarctica
6 Cimilada dhulka Arctic
7 Dhirta Polar
Astaamaha cimilada cirifka
Cimilada cirifku waxaa lagu gartaa had iyo jeer yeelasho heerkulka ka hooseeya 0ºC, awood u lahaanshaha imaatinka illaa -93ºC (cirifka woqooyi), maadaama falaadhaha qorraxdu ay aad u janjeeraan marka loo eego dusha dhulka Roobabku aad ayey u yar yihiin, qoyaanka u dhow ayaa aad u hooseeya dabayshana waxay ku dhacdaa xoog badan oo gaareysa 97km / h, sidaa darteed ku noolaanshaha halkan waa wax aan macquul aheyn (in kastoo, sida aan hoos ku arki doonno, waxaa jira xayawaanno iyo dhir dhirta ah oo u suurtagashay inay la qabsadaan deegaankan cadaawadda leh).
Qorraxdu tiirarka waxay u ifaysaa si aan kala go ’lahayn muddo lix bilood ah (guga iyo xagaaga). Bilahaan waxaa lagu yaqaan magaca »Maalin cad» Laakiin lixda kale (dayrta iyo jiilaalka) waa la qarinayaa, waana sababta loogu yaqaanay »Habeen Polar".
Tusaalaha garaafka cimilada
Climograph of Svalbard, jasiiradaha ku yaal Badweynta Arctic Glacial
Si loo helo fikrad cad oo ku saabsan sida cimilada cirifku u eg tahay gobolladan adduunka, aynu tusaale u soo qaadanno jaangooyada Svalbard, oo ah jasiirado ku yaal Badweynta Arctic Glacial. Bisha ugu roobka badani waa Ogosto, oo ku dhacda qiyaastii 25mm, tan ugu qalalanna waa Maajo, oo ku dhacda 15mm; Si kastaba ha noqotee, kan ugu kululaa waa Juun, oo heer kulkiisu yahay 6-7ºC, iyo Janaayo ugu qabow, oo leh -16ºC.
Halkee ku taal?
Meeraha Dunida waxaa ku yaal laba aag oo waaweyn oo qabow, oo u dhexeeya 65º iyo 90º woqooyi iyo latitude latitude, kuwaas oo ah Cidhifka woqooyi iyo Xarkaha Koofurta. Midka koowaad, waxaan kaheleynaa Arctic Circle, tan labaadna, Antarctic Circle. Laakiin gobolada kale ee buuraha dheer, sida isu imaatinada Himalayas, Andes ama buuraha Alaska, waxaa jira cimilo aad ula mid ah tan tiirka, waana sababta ay badanaa ugu jiraan metelaadda juquraafi ahaanta cimilada.
Noocyada cimilada cirifka
In kasta oo laga yaabo inaan u maleyno inay jirto hal nooc oo cimilada cirifka ah, dhab ahaantii waxaa loo qaybiyaa laba:
Dhuldhoobo: waa midda aan dhirtu wax badan ka soo bixin; badankood waa cows gaagaaban. Markaan ku soo dhowaanno wareegyada cirifyada, waxaan helnaa dhul leh ubax la'aan. Dhir iyo xayawaano kaladuwan ayaa halkaan ku nool, sida orsada tiirka.
Baraf ama baraf: waxay u dhigantaa dherer ka weyn 4.700m. Heerkulku aad buu u hooseeyaa: had iyo jeer wuxuu ka hooseeyaa 0 darajo.
Aad iyo aad u qiimayaasha kuleylka ayaa laga diiwaan geliyaa Antarctica. Cimilada tundra waxay ka dhacdaa aagagga xeebta iyo jasiiradda Antartika, celceliska heer kulka inta lagu jiro bisha xagaaga waa 0 darajo, xilliga qaboobahana ugu yaraan wuxuu hoos ugu dhici karaa -83ºC, iyo xitaa ka sii badan. Celceliska heerkulka sanadkii waa -17ºC.
Ma helayo shucaac badan oo qoraxda ah, iyo sidoo kale, ilaa 90% ka mid ah waxaa ka muuqda baraf, sidaas awgeed ka hortagga dusha sare ee kuleylka. Sababtaas awgeed, Antarctica waxaa loogu yeeraa "Qaboojiyaha Dunida."
Cimilada dhulka Arctic
Cimilada ku teedsan Arctic waa mid aad u qallafsan, laakiin ma ahan mid aad u daran sida Antarctic. Jiilaalku waa kuwo aad u qabow, oo leh heerkul hoos u dhici kara -45ºC, iyo xitaa ilaa -68ºC. Xilliga xagaaga, oo soconaya lix illaa toban toddobaad, heerkulku aad buu uga fiican yahay 10ºC.
Qoyaanku aad ayuu u hooseeyaa, marka laga reebo xagaaga meelaha xeebta ku yaal. Heerkulka sanadka intiisa kale waa mid aad u qabow, biyuhuna si dhib yar ayey uumi baxaan. Sidoo kale, roobku aad ayuu u yar yahay, gaar ahaan xilliga qaboobaha.
Dhirta polar-ka waxaa lagu gartaa inay leedahay cabbir yar. Dabayluhu si xoog leh ayey u dhacaan, marka waa lama huraan in aad ugu dhawaato dhulka sida ugu macquulsan. Laakiin ma fududa, maadaama ay qabow tahay ficil ahaan sanadka oo dhan. Sidaa darteed, geeduhu ma noolaan karaan, sidaas darteed dhulkii yaraa ee ay dhirtu ku noolaan lahayd ayaa la gumeystay muuse, liisanka y xoqid.
Dhirta waxaa laga heli karaa oo keliya tundra, Maaddaama lamadegaanka cad ee gobollada cirifka xaaladuhu aysan ku habboonayn nolosha.
Fauna Polar waxaa lagu gartaa iyadoo leh baahi degdeg ah si looga gaashaanto dhaxanta daran. Si tan loo gaaro, waxay qaateen qaabab kala duwan, tusaale ahaan: waxaa jira qaar leh jaakad cufan oo waliba urursada dufan subcutaneous; waxaa jira kuwa kale oo dhisa godad dhulka hoostiisa mara ama qolalka hoose, iyo kuwa kale oo doorbida tahriibka.
Ka mid ah xayawaannada ugu badan ee matalaya waxaan haysannaa garaaca ubaxa, taas oo ah xayawaanka ugu weyn ee ku nool Arctic, the lobo, miski dib, ama ariga barafka. Waxa kale oo jira xayawaanno biyo ku jira, sida shaabadood, Yeyda badda, ama shark, sida kuwa Somniosus microcephalus taas oo ku quudisa orso tiirka.
Taasna waxaan ku dhamaynaynaa. Maxaad ka aaminsanayd macluumaadka cimilada cad?
Wadada buuxda ee maqaalka: Saadaasha Shabakadda » Saadaasha hawada » Cimilada » Cimilada Polar
taasi waxay ahayd natiijada ugu fiican mahadsanid
Jawaab wendy ana gonzalez
Tani waa wax cajiib ah waxaan ku guuleystey inaan helo wax walba oo aan u baahdo
Waa qabow laakiin maahan waxa aan raadinayo.
Dhuxulada Hawaii waxay halis ugu jiraan inay ka baxaan kuleylka adduunka